Kedu ihe na-azụkarị ndị ahịa? Nkọwapụta nke ụbụrụ ego
Malite mgbazinye ego Wiki n'ji n'aka
a n'ji n'aka a na-akpọkwa ya dị ka onye na-azụ ahịa ma ọ bụ ụgwọ nkịtị. Dị ka onyinye eji enyefe ego, ọ bụ ụdị ejiji na Germany. N'okpuru Mfe: Ịkwụ Ụgwọ nke Onwe - Youtube, ị nwere ike ịhụ vidiyo nke na-akọwa akụkụ ndị dị mkpa nke ụdị ego a.
Onu ahia ndi mmadu: Ugboro ojiji
Dị ka aha ahụ na-egosi, otu ego eji eji eme ihe na-ebute mmezu nke oge dị mkpụmkpụ ma dị oke ọnụ. N'ihi ya, a na-akwụ ụgwọ nrọ mgbe nile site na mgbapụ dị otú ahụ. Otu ihe a na-emetụtakwa ịzụta ụgbọ ala ma ọ bụ ntọala sofa. Tụkwasị na nke ahụ, ọtụtụ ndị na-ahọrọ ego dị otú ahụ iji kwụnye ego dị ọnụ ahịa dị egwu na akaụntụ dị ugbu a. Na oge nke obere ọnụego, ego mgbazinye onwe ya dị mma, ọ bụ ezie na ọnụ ala dị ala adịghị, ma ọ bụ na enwere mmetụta na-enweghị isi na ya, ọnụọgụ ego nwere ike iwepụ.
Onyinye ndị na-azụ ahịa bụ ego ejiji, nke a na-agaghị edozi ngwa ngwa n'otu ọrịa strok. Ebumnuche nke na-esite na ya kwesiri ka ọ bụrụ na ị ga-ewepụ ego ahụ kpamkpam na-akwụ ụgwọ.
Onye ọ bụla nke na-apụnara ego ga-ama na ọ dị ugbu a ụgwọ maka oge atọ ruo afọ ise. N'ihi ya, a gaghị anabata ego a dị ka nke a na-akwụghị ụgwọ, ya mere, a ga-atụle nkwubi okwu ahụ nke ọma.
Njikere ejiji: Otu esi kwusi
Onu ogugu bu uzo di mfe na nke ndi na-achoghi ulo akwukwo: otutu oge ka o na-eme mmeju nke ochicho di ka ihe ndi ozo. A na-akwadebere ọtụtụ bank maka nke a, nke mere na a pụrụ ịkwụ ụgwọ ego ahụ na EUR 5.000 n'otu ụbọchị ahụ, ma ọ bụ nyefee ya na nkwụnye ego.
Inye ego mgbazinye ego dị mfe: onye ahịa na-enye ọrụ nkwekọrịta ọrụ na ụgwọ ụgwọ maka ọnwa isii gara aga. N'ihe banyere ndị ọrụ onwe ha, ụgwọ nkwụ ụgwọ maka ọnwa isii gara aga ga-eru eru. Ọ bụrụ na a ga-akwụ ụgwọ ụgwọ mgbe niile, a ga-enye gị ụgwọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ozugbo. Ọdịdị dị elu na-abụkarị ọnwa atọ, nke a na-ejikarị emegharị obere. Banyere EUR 5.000, - bụ oke kachasị ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ maka ihe eji eji ego.
More na ndị ọzọ ndị mmadụ na-now n'ọrụ na-adịru nwa oge ọrụ, nke bụ isi a agbazinye n'ụzọ: A n'ji n'aka nwere a multi-afọ ịkwụ ụgwọ oge, nke onye ọrụ na-ejedebeghị na ọnwa iri na abua nwere ike ekwe nkwa. Site ala mmasị udu na ezigbo ọrụ ọnọdụ na Germany, mmiri bụ ma ebe a nnọọ na-emesapụ aka: Ọ na-chere na onye ga-ahụ a nwa oge nkwekọrịta mgbe ọzọ ọrụ, ya mere na mbinye ego ngwa ukwuu n'ime kwetara.
A na-ejikọta ego mbinye ego na ihe ọmụma na Schufa: Onye ọ bụla nke nwere ntinye na-abanye na nke a abụghị ihe ọ bụla nke ajụjụ ịgbazinye. Otú ọ dị, ụlọ akụ ahụ meghachiri ihe a: ọtụtụ ụlọ akụ taa nwere ụlọ akụ dị ka ndị enyemaka, bụ ndị dị na mba ọzọ. Usoro iwu German siri ike anaghị etinye ebe a. Onye ahịa ahụ nwere ike ịrịọ online n'ịntanetị ma nata ya site na otu ụlọ akụ ahụ, nke ga-agọnahụ ya ma ọ bụ onye na-azụ ndị na-azụ ahịa. Onu ogugu ntaneti n'igwe bu ugwo karia ihe eji eme ihe n'igwe, ma ozo nwere otu onodu. Ihe omuma a na-egosi na ọ bụ oge iji chekwaa banyere ụlọ akụ na ntanetị n'ịntanetị na njikọ schufa na ịgbazinye ego na oge ntanetị n'ịntanetị.
Isiokwu bu nke aagbaziri
Isiokwu ọzọBanking Act